Naag iyo Jeceyl Nin iyo Ixtiraam | Raaxada guurka
» Naag iyo Jeceyl Nin iyo Ixtiraam
In qofba qofka kale uu ixtiraamo waa lagama maarmaan nolosha guurka, nabigeenuna aad ayuu ugu celceliyay asagoo marna u jeedinayo haweenka marna ragga. Laakiin waxaad moodaa dhinaca ixtiraamka in uu haweenka aad ugu bogaadiyay oo uu faray in nimankooda ay xalaasha ku guursadeen aad u ixtiraamaan una ciseeyaan. Xitaa heer wuxuu gaaray nabiga inuu yiraahdo “Hadii aan qof fari lahaa inuu qof qof kale u sujuudo, waxaan fari lahaa naagta inay ninkeeda u sujuudo”. Dabcan Nabigeena AWC hadafkiisa ma ahayn inuu dumarka liido, balse xikmad weyn ayaa ku jirta xadiiskan. Maxaa yeelay sida dabiiciga ah, ninka raga ah markuu ixtriaam ka helo haweenaydiisa, wuxuu ku jawaabaa inuu jeceylkiisa uu tuso, wuxuu kaloo helaa xamaasad dheeraad ah iyo firfircooni u sahalysa tacab maalmeedka. Sidoo kale haweenka markay ogaadaan jeceylka ninkooda uu u qabo, farxad iyo kalsooni dheeraad ah ayaa soo galaya taasoo u sahlaysa howsha guriga iyo tacabka caruurta.
Dhibaatada ugu wayn waxay tahay ragii qaar oo aaminsan in xaaska la ogeysiinayo jeceylkooda uusan daruuri ahayn, qaarna waa iskala weyn yihiin iyo qaarna waaba ka xishoodaan. Raggu xitaa qaar baa aaminsan kulana taliya asxaabtooda inayan ogeysiin jacaylka naagahooda ay u qabaan. Waxay ku andacoonayaan in hadii la ogeysiiyo xaaska ay kuugu kor soconayso ama buur isa saarayso. Rag qaarkii oo aad ugu fiican ayaa jiro in ay ogeysiiyaan jeceylka ay xaaskooda u qabaan, laakiin dadka arkaya in ninkeeda u jajaban yahay waxay ku xamanayaan in ay sixirtay oo aanay caadi ahayn. Tusaale waxaa inoogu filan in haweenku muhimad balaaran siiyaan in ay ogaadaan jeceylka ninkooda u qabo. Sheekadi dhexmartay Caa’sha (Ummul Mu’miniin) iyo Nebigeena suubanaa marka ay weydiisay ayadoo dhahaysa:
Rasuulka Alle: Xariga waa sidiisa (Wax is kama bedelin), Ilaahaan ku dhaartee, kama murgo goortaan dhimanaya, markaan ogaaday adiga inaad xaaskeyga tahay markaan jannada galno. Caa’isha markay maqashay hadalkan macaanta baday aad ayay ugu faraxday. Waxaa dhacaysa in raggu markay ka gaabiyaan in ay tusaan jeceylkooda badanaaba haweenku waxay ku jawaabaan dhaleeceyn, calaacal iyo ixtiraam la’aan. Raggana sidoo kale markay ixtiraam ka waayaan haweenaydooda, qaar waa ismoogeysiinayaan, qaarna muran ayay ku jawaabaan oo dabkii shidnaa ay dab kale ku sii daraan Gurigoo dhan ayaa ciriiri noqda markay xaaladani jirto (Ijiid aan ku jiidee waa gacmo daalis). Sida kaliya looga baxsan karo ciriirigan in labada qofood mid ka mid ah hurdada ka koco uu rogo dabeecadiisa, sida ninkii inuu bilaabo tusida kalgaceylka uu u qabo xaaskiisa. Ilaahayna qawm ma bedelo ilaa ayaga nafsadoodi ay isbedelaan.
Anonymous8/12/2012Aad iyo aad baad uugu mahadsantahay qoraalkaaga. Ilaah baan ku dhaartee waa waxa aan rabay inaan maqlo waqti xaadirkaan xaalada aan ku jiro owgeed. Wax badan baan ka faai'day xaqiiqdi, ee kuwii Rabbow kuligeen naga dhig. MahadsanitReplyDeleteAnonymous8/12/2012Masha Allah. Walaal mahadsanid waa mowduuc muhiima.ReplyDeletemohamed ahmed5/22/2013aniga jacayl ayaan i madhiyay o i qalafiya gabadhaa jeclaana faro kuma hayo ee ila taliya akhyaareeReplyDeleteAdd commentLoad more...
Qaabka ugu fiican galmada
Waxaa jira 150-hab oo galmada oo la sameeyo , mana lagu soo koobi karo sharaxaad waxase ka qaadaneynaa dhowr hab oo galmada cusub ah oo raax...
Ibta oo loo qanqaniino si khafiif ah oo ay xaasku ku istiinto. Calaacasha gacanta oo la dhunkadaa ma laha istiin sidaasi u sii ridan, ha ye...
Sida gabadha biyaha looga keeno
Afti la sameeyay ayaa lagu sheegay in 70% haweenka aysan helin macanka gariirka galmada taasina ay sabab u tahay iyadoo ninka uusan ...